Ma ogtahay in dalka France Taariikh cusub u dhigay koobka yurub? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Ma ogtahay in dalka France Taariikh cusub u dhigay koobka yurub?
Ma ogtahay in dalka France Taariikh cusub u dhigay koobka yurub?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 4-07-16 7:39 AM Xulka dalka France oo Xalay wacdaro ku dhigay dalkii yaraa ee reebay England Iceland ayaa Taariikh Cusub Waxa uu u dhigay koobka qaramada qaarada yurub isaga oo sameeyey Wax aan lasamayn tan iyo Markii labilaabay koobkaas 1960 kii.
France oo 5-2 ku Garaacay dalka Iceland ayaa noqday dalkii koowaad ee Taariikhda koobka yurub afar Gool dhaliya inta aysan dhamaan qaybta hore ee Cayaarta Waxaana France ay dhaliyeen afar Gool qaybta Hore intii ay socotey.
Wiilasha Macalin Didier Deschamps’ ayeysan wax dhib ah ku qaadan in ay si sahlan Goolal uga dhaliyaan Xulkii ay ladheleen Waxayna 7 da bishaan la dheeli doonaan Jarmalka oo soo dar daray Talyaaniga oo uu Rigoorayaal kaga badiyey.